Vao tonga eny am-bavahady ny olona tsirairay dia mandena ny kirarony ao anatin'ilay fitoerana rano misy "eau de javel ".Vita izay dia manasa ny tanana amin'ny rano sy savony madio tsara izy vao afaka miditra ny vavahady. Rehefa miditra ny varavarana indray dia efa misy ny fakana maripana vao mamonjy ny toerana handehanany ny olona iray. Ny polisy dia tsy vitan'ny manaja ny 1 metatra rehefa mivory fa mitady toerana malalaka mihitsy hialana amin'ny mety ho fifampisakasohana. Ireo polisy mandray olona kosa dia tsy maintsy manao tampim-bava ary tahaka izay ihany koa ireo olona raisiny. Tsy adino ihany ny manisy fanafody ny trano fiasana hamonoana ireo mikraoba isan-karazany. Ireo fepetra ireo no noraisina dia mba hiarovana ny ain’ny polisy sy ireo olona manana anton-draharaha ety anivon’ny Ministeran’ny filaminam-bahoaka.